दन्त रोग विशेषज्ञ डा. प्रतीक्षाको सल्लाह : दसैं तिहारमा दाँत तथा मुखलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ दन्त रोग विशेषज्ञ डा. प्रतीक्षाको सल्लाह : दसैं तिहारमा दाँत तथा मुखलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ
दन्त रोग विशेषज्ञ डा. प्रतीक्षाको सल्लाह : दसैं तिहारमा दाँत तथा मुखलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ
डा. प्रतीक्षा श्रेष्ठ मुख तथा दन्त रोग विशेषज्ञ डिपार्टमेन्ट अफ ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलोजी कान्तिपुर डेन्टल कलेज बुधबार, २०७८ असोज २७ गते, ०७:३७ मा प्रकाशित
स्वस्थ जीवनका लागि दाँतलाई स्वस्थ राख्न पनि जरुरी छ । हामीले आफ्नो शरीरको अन्य अङ्गजस्तै आफ्नो दाँतलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । दाँतको हेरचाह गर्नका लागि विशेषत: दैनिक दुई पटक दाँत माझ्ने, अड्किएका खानेकुरा निकाल्न फ्लस गर्ने र समय–समयमा दाँतको जाँच गराउनु पर्दछ ।
हामीले चाडपर्वको समयमा अझ दाँतको विशेष गरी ध्यान दिनुपर्दछ । नेपालीको महान् पर्व दसैँमा हामीले प्रायः खाने मासुका परिकार, पेय पदार्थ हुन्छ । ध्रुमपान बढी गर्छन् । जसले दाँत तथा मुखमा समस्या देखिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
दसैँमा ३/४ दिनसम्मै मासुको विभिन्न आइटम अत्याधिक खाने गरिन्छ । मासु खाँदा पनि धेरै पकाएर नरम पारेर खाने गर्नुपर्दछ । कसैको हड्डी पनि खाने बानी हुन्छ । हड्डी र साह्रो मासु चाहिँ सकेसम्म खान हुँदैन । हड्डी खाँदा हड्डीले दाँत टुक्रिने, दाँतमा अड्किने र गिजा तथा मुखको अरू भागमा घोचेर चोटसमेत लाग्ने गर्दछ । अस्पताल नै धाउन पर्ने केस पनि धेरै आउने गरेका पाइन्छ । त्यसैले सजग भएर मासु खानु बेस हुन्छ ।
मासुका परिकारका साथै यस समय मिठाइहरू बढी मात्रामा खाने गरिन्छ । मिठाइ खाएपछि तुरून्त कुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ । मिठाइ अड्किएर लामो समय बस्यो भने किरा लाग्ने समस्या हुन्छ । सकेसम्म यस्ता खाने कुरामा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
अर्को भनेको मासुको साथमा हामी आफ्नो घरमा र हाम्रो नातेदार भेटघाट गर्न जाँदा बढी मात्रामा पेय पदार्थ खाने गर्छौ । यो खाँदा पनि होस् गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा भएको गुलियो पदार्थले पनि दाँतमा किरा लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कोल्ड ड्रिंक्स सकेसम्म कम खाने र खाएपछि नियमित दाँत कुल्ला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले दाँतमा किरा लाग्न दिदैन् ।
यसबाहेक दसैंको अष्टमीदेखि घरमा पूजा हुने गर्छ । पूजाका कारण खाना खाने टाइम पनि ढिलो हुन्छ । जसले लामो समयसम्म भोको रहँदा ग्याष्ट्रिक नहुनेलाई पनि त्यसको समस्या देखिन थाल्छ । ढिला खाना त्यहीमाथि चाडपर्वमा चिल्लो खानेकुरा खाइन्छ, जसले पेटमा समस्या आउन सक्छ । ग्याष्ट्रिकले पेटमा मात्र नभएर मुखमा पनि समस्या ल्याउँछ । ग्याष्ट्रिक भैइसकेपछि अमिलो पानी मुखबाट आउने हुन्छ, जसले दाँतहरू खिइने, श्वास गन्हाउने र मुखमा अल्सरसमेत गराउने एक कारण मध्ये यो पनि एक हुन सक्छ । सकेसम्म हामीले चाडपर्वमा स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सकेसम्म खाना समयमा खाने र चिल्लो कम खाने प्रयास गर्नुपर्छ ।
दैनिक कति पटक ब्रस गर्ने ? कस्तो मन्जन प्रयोग गर्ने ?
दिनको दुई पटक ब्रस गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नरम ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः मानिसको बिहान एक पटक मात्रै ब्रस गर्ने बानी हुन्छ । तर, हामीले दैनिक सकेसम्म दिनको दुई पटक ब्रस गर्नुपर्छ ।
बिहान र बेलुकी खानापछि नियमित ब्रस गर्नुपर्छ । दाँत माझ्दा तलमाथि, दायाँबायाँ गरी राम्रोसँग विस्तारै माझ्नुपर्छ । फ्लोराइडको मात्रा भएको मन्जन र नरम ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । दाँतको कुना–कुना जहाँ खानेकुरा अड्किएको ब्रसले भेट्न पाउँदैन, त्यसको लागि ‘डेन्टल फलस’को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दाँतमा खानेकुरा अड्किए के गर्ने ?
दाँतमा ग्याप धेरै भएर खानेकुरा धेरै नै अड्किने समस्या पनि हुने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले इन्टर डेन्टल ब्रसको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ । अर्थो डेन्टल ब्रसले पनि दाँत सफा गर्न सकिन्छ । यदि तपाईंले दाँतमा ब्रेसेस लगाउनु भएको छ भने अर्थोडन्टिक ब्रसले दाँत सफा गर्न सकिन्छ । कुनै—कुनै ब्रसको पछाडि भागले पनि जिब्रो सफा गर्न सकिन्छ ।
पटक–पटक खाइसकेपछि साधारण पानीले कुल्ला गर्ने बानीले दन्त स्वास्थ्यलाई निकै मद्दत गर्छ । जसकारण अड्किएको खानेकुरा निक्लिने हुन्छ । खानेकुरा अड्किएपछि सिन्का, टुथपिकले निकाल्न प्रयास गर्ने गर्छौं । सकेसम्म सिन्का वा टुथपिकले निकाल्न हुँदैन् । यसले निकाल्दा दाँतमै अड्किने हुन्छ । जसले गिजामा जथाभावी कोट्याउँदा घाउ हुने हुन्छ । मासु अथवा अनेक खानेकुरा दाँतमा अड्किएमा डेन्टल फल्स भन्ने धागोको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
भिडियो रिपोर्ट : पाठेघरबाट किन बग्छ सेतो पानी ? पाठेघरको…
दशैंमा वृद्धवृद्धाले के खाने, कति खाने ?
दशैंमा मुख/दाँत स्वास्थ्यका लागि ध्यान दिनैपर्ने कुराहरू
भिडियो रिपोर्टः गर्भवती महिलाले दैनिक गर्नुपर्छ यस्ता काम
भिडियो रिपोर्ट : किन हुन्छ ढाड वा कम्मरको दुखाइ, कसरी…
दन्त स्वास्थ्यका समस्या र समाधानका उपायहरु [भिडियो सहित]